Fedora 21 ကိုသွင်းပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမလဲ။ | Linux မှ
Fedora ကိုသွင်းပြီးသည့်နောက်ဘာလုပ်ရမလဲ 21
မင်္ဂလာပါ FromLinux မှသူငယ်ချင်းများ၊ ဒီနေ့သင်အတွက် post-tutorial ကိုပို့ပေးပါ Fedora 21 သင့်ရဲ့ default Gnome ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူ။ ခါတိုင်းလိုအဖြစ်အချို့ပုံများ:
Fedora 21 ကိုဘယ်မှာရမလဲ။
KDE, LXDE, XFCE သို့မဟုတ် Mate ကဲ့သို့သောအခြားမူကွဲများကိုဤနေရာမှ download ရယူနိုင်ပါသည်။
Fedora ကို download လုပ်ပါ
Terminal ကိုဖွင့်ပြီး root အောက်မှာ execute:
yum update ကို
RPMFusion တပ်ဆင်မှု -
wget http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-21.noarch.rpm && yum ကို install လုပ်ပါ rpmfusion-free-release - 21.noarch.rpm wget ကို install http://download1.rpmfusion.org /nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-21.noarch.rpm && yum သည် rpmfusion-nonfree-release-21.noarch.rpm ကိုထည့်သွင်းပါ
Flash တပ်ဆင်ခြင်း -
သင် package ကိုတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် - http://get.adobe.com/cz/flashplayer/ yum အတွက်မူကွဲကိုရွေးချယ်ပြီးဒေါင်းလုပ်ဆွဲထားသောအထုပ်ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါ။
အသုံးအများဆုံး packages များတပ်ဆင်ခြင်း:
yum update && yum ကို Install လုပ်ပါ java-1.8.0-openjdk flash-plugin icedtea-web firefox thunderbird unrar zip unzip p7zip vlc libreoffice gimp wget mc htop gnome-tweak-tool filezilla system-config-firewall brazier
yum ကို install gstreamer gstreamer-plugins- ကောင်းသော gstreamer-plugins-bad gstreamer-plugins-ugly gstreamer-ffmpeg
ထိုအဆင်သင့်။ Fedora 21 မှာအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » Fedora ကိုသွင်းပြီးသည့်နောက်ဘာလုပ်ရမလဲ 21
69 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
@petercheco ကိုမျှဝေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါ Fryer ကိုအချိန်အကြာကြီးမပေးခဲ့ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် SystemD ကိုမနှစ်သက်တဲ့သူတွေကတော့ #Fuuuudora ကိုချိတ်လိုက်ကြလိမ့်မယ်။
အဲဒီမှာ virtual virt တစ်ခုထားလိုက်ပြီးဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။
ကျွန်ုပ်၏အလုပ်တွင် Windows 8.1 Developer Preview ကိုအသုံးပြုနေစဉ် Windows 10 ကိုအသုံးပြုသည်ဟုကျွန်ုပ်မည်မျှအံ့သြသင့်သနည်း။
ကြိုဆိုပါတယ်သူငယ်ချင်း ဒါဟာစမ်းသပ်ခံရဖို့ထိုက် :) ။
Great distro၊ ကျွန်တော်တို့က virtual machine တစ်ခုမှာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာစမ်းသပ်ပါလိမ့်မယ်။
Fedora က gnome tweak tool နဲ့လာပါသလား။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မပေးရင်၊ ငါက recommend အကြံပြုပါသည်
ကျွန်တော့်လမ်းညွှန်ထဲမှာ install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုလာသလဲ
အရေးအပါဆုံးနှင့်ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ထိုအမှိုက်များကိုမျိုးရိုးဗီဇမှဖယ်ထုတ်ပြီး KDE [/ troll] ကဲ့သို့လျောက်ပတ်သော desktop တစ်ခုထားရန်ဖြစ်သည်။
အလေးအနက်ထား (ကောင်းပြီ၊ ယခင်ကဖြစ်ခဲ့ဖူးသောတစ်ဝက်လေးနက် xD ဖြစ်သည်) Fedora အတွက်အလွန်ကောင်းသည့်သိုလှောင်မှုအလွန်နည်းပါးသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်အတွက်တော့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
yum ထည့်သွင်းပါ http://mirror.yandex.ru/fedora/russianfedora/russianfedora/free/fedora/russianfedora-free-release-stable.noarch.rpm
yum ထည့်သွင်းပါ http://mirror.yandex.ru/fedora/russianfedora/russianfedora/nonfree/fedora/russianfedora-nonfree-release-stable.noarch.rpm
Chromium, Skype၊ Opera၊ rar, flash, java 1.6 နှင့်ထို့ထက်ပိုသည်။ နီးပါးဘာမျှ xD ။ ဒီ repo က flash player ကိုထောက်ပံ့ပေးတာကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ သင် Adobe repo မပါပဲလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Postinstallerf - ဆော့ဝဲလ်အမျိုးမျိုး၊ အထူးသဖြင့်မာလ်တီမီဒီယာ၊ အလွန်အသုံး ၀ င်သည်၊
နောက်ပိုင်းတွင်သင်သည် software center တစ်ခုထည့်သွင်းနိုင်သည်။
yin postinstallerf install လုပ်ပါ
အချို့သောပရိုဂရမ်များကိုတပ်ဆင်ပြီးအချို့သောပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်စိတ်ဝင်စားသည်။ မကောင်းတာကဒီပရိုဂရမ်က Dropbox repo ကို install လုပ်တာက Gnome ကိုသင်မသုံးဘူးဆိုရင်ရုရှားဖီဒိုရာကဒီအထုပ်ကိုထောက်ပံ့ပြီးကတည်းကစိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းဘူး၊ application ကို update လုပ်သည့်အခါတိုင်းထို repos များကိုဖျက်ရန်ငါ post transaction Actions plugin ကိုသုံးသည်။
နောက်ဆုံးဒီ repo ကနည်းနည်းထူးဆန်းတယ်။
RPM-နယ်ပယ် - ထောင်ပေါင်းများစွာသော package များပါ ၀ င်သည်။ ဆိုးရွားလှသည်မှာ၎င်းသည်အလွန်စိတ်ချရမှုမရှိခြင်း၊ ၎င်းတို့ကိုသင်ထည့်သွင်းပြီး၎င်းတို့သည်မည်သည့်နည်းနှင့်မျှအလုပ်မလုပ်သောကျိုးပဲ့နေသောအခြားအစုအဝေးများဖြစ်သည်။ အလုပ်လုပ်သော package များနှင့်၎င်းတွင်ပါရှိသော gtk နှင့် icon themes များဖြစ်သည်။ ငါ sopcast ဂရပ်ဖစ် interface ကိုနှင့်အခြားအရာတစ်ခုခုကိုအချို့သောစစ်တုရင်အင်ဂျင် installed ပါပြီ။ ငါသင်တပ်ဆင်ရန်အလွန်အမင်းအကြံပြုပါသည်၊ သင်လိုအပ်သည့်အရာတစ်ခုခုအတွင်းသင်မည်သည့်အချိန်၌ရှာမည်ကိုသင်ဘယ်တော့မျှမသိပါ။
wget သည် http://download.opensuse.org/repositories/home:/zhonghuaren/Fedora_20/home:zhonghuaren.repo -O /etc/yum.repos.d/rpm-sphere.repo
Fedora ၂၁ အတွက် repo ဗားရှင်းမရှိသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် repo ကအလုပ်လုပ်မှာပါ။ Fedora 21. ကိုညွန်ပြရန်ဖိုင်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ Repo သည် active ဖြစ်ပြီး၊ နောက်ဆုံးပြုပြင်ခြင်းသည်ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်မှစ၍ ဖြစ်သည်။ ။
petercheco, ... Fedora မှာ system ဘယ်လောက်ကောင်းခဲ့သလဲ ... Linux နဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ software ပါ။
စကားမစပ်, FreeBSD ကို Xfce, Slim? နှင့်ဘယ်လိုအလှဆင်ပုံနှင့်ပတ်သက်သည့်ဒုတိယလမ်းညွှန်နှင့်ထွက်လာသည့်အခါနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်သနည်း။
Nando မင်္ဂလာပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည် firewall နှင့်ဆက်သွယ်နေပြီး server package များနှင့်အရူးအမူးလုပ်နေသည်။ မကြာခင်မှာ FreeBSD နဲ့ Gnome-shell ပါ ၀ င်ပြီး 230 megabytes Ram :) ကိုအသုံးပြုပါလိမ့်မယ်။
စာရွက်စာတမ်း၏ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းကိုမျှော်လင့်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပထမအပိုင်းနှင့်ပါတ်ခ်ျရှိုး ...
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်၊ ငါ Debian ကိုစွန့်ပြီး FreeBSD ကိုပြောင်းဖို့စဉ်းစားနေတယ်၊ ​​နှစ်အတော်ကြာကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အခု pkg ကိုပြောင်းလိုက်ရင်ငါအတွက်တော့ပိုပြီးတော့အဆင်ပြေသွားပြီ။
ကျွန်တော့်ကိုနှေးကွေးစေသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာ (ကျွန်ုပ်၌၎င်းသည်ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောပရိုဂရမ်များအားလုံးရှိသည်ကိုအတည်ပြုသောကြောင့်) - ဝိုင်ဖိုင်ဆက်သွယ်မှုများမည်သို့ပြုလုပ်သည်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ အခု GNU / Linux မှာ wicd ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်သူက FreeBSD ကို port မထားဘူး။ ငါ laptop နဲ့မတူတဲ့ကွဲပြားတဲ့ wifis တွေနဲ့ဆက်သွယ်နေတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါက connection files တွေကိုပြုပြင်မွမ်းမံဖို့တုတ်အနည်းငယ်ကိုတွေ့လိုက်တယ်။ ကြောင်း rc.conf နှင့် wpa ထင်) ။ ဒီပြissueနာကိုသင်ဖြေရှင်းပြီးပြီလား။ ကြိုက်တယ်။ wifi သုံးရင် ...
သင်၏ wifis ကိုစီမံရန် wifimgr ကိုကြိုးစားကြည့်ပါ။
pkg wifimgr install လုပ်ပါ
FreeBSD ကိုသင်ဖော်ပြပြီးတဲ့အခါ gnome ကို install လုပ်ခြင်းအတွက်လမ်းညွှန်တစ်ခုလုံးရှိတာကောင်းပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကအဲ့ဒီ installation နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိမိခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ graphical environment ဆီကိုလုံးလုံးလျားလျားရောက်သွားတယ်။
တစ်ခုလုံးအနေဖြင့် GNU / Linux ကျွမ်းကျင်သူကဆိုသည်
FreeBSD xfce ကိုလှပအောင်ပြုလုပ်ရန်ဒုတိယလမ်းညွှန်ကိုကျွန်ုပ်လိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်အား၎င်းကို၎င်း၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့် icon များဖြင့် fedora ကဲ့သို့ကြည့်ရှုရန်လိုသည်။
သင်၎င်းတို့ကိုထုတ်ယူပြီးသင်၏အိမ်တွင်ဖိုလ်ဒါနှစ်ခုကိုပြုလုပ်သည်။ .icons ဟူသောအမည်နှင့်တစ်ခု .themes အမည်ပါသောတစ်ခုဖြစ်သည်
.icons ဖိုလ်ဒါထဲမှာ Numix စက်ဝိုင်းနဲ့ Numix ဖိုင်တွဲတွေကိုသင်ကူးထည့်ပါ
.themes ဖိုင်တွဲထဲမှာ Numix (GTK) ဖိုင်တွဲကိုသင်ကူးလိုက်ပါ။
ယခုသင်သည် XFCE ဆက်တင်များမှ themes များကိုသာရွေးချယ်ပါ။
ဒီ distro ၏ superfans များအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ဆော့ဗ်ဝဲဟာအခမဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီထက်နည်းရင်ပိုတိုးတက်လာတယ်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရတာကောင်းပါတယ်။
ကျွန်ုပ်လိုချင်သည် - နောက် Fedora version အတွက်ကြိုတင်ထည့်သွင်းရန်ရွေးချယ်နိုင်သော pc ထွက်လာလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်အရာများစွာရှိလိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းတို့အားလုံးအထက်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ကွဲပြားခြားနားသည်ဟုယုံကြည်မှုရှိသည်။ အဲဒါမရှိဘူး၊ သူကငါ့ကိုဘယ်တော့မှပိုင်ဆိုင်မှာမဟုတ်တဲ့စီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲကိုပေးတယ်။ Fedora ကဲ့သို့သောအားသာချက်တစ်ခုကသူတုို့ခြေလှမ်းတိုင်းကိုပြသသည်
သင်ဟာ Red Hat beta-tester ဖြစ်ကြောင်းသိပြီးပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီမှစီစဉ်မထားသည့်အခြား GNU / Linux ကိုထည့်သွင်းရန်ရွေးချယ်ပါ။
မိုက်မဲသောအရာတို့ကိုပြောရပ်တန့်။ Fedora သည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုတီထွင်သည်၊ ထောက်ခံသည်။ အကယ်၍ သင်ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုမသိလျှင်သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုကျွန်ုပ်နားလည်လိမ့်မည်။ Red Hat နှင့်သင်နှစ် ဦး စလုံးသည်စဉ်ဆက်မပြတ်တီထွင်သောဤဖြန့်ဖြူးခြင်း၏အလုပ်မှအကျိုးရရှိသည်။
Pamp သည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုထောက်ပံ့သည်၊ သို့သော်၎င်းမှာအခမဲ့မဟုတ်သော Firmware နှင့်အတူလာသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည် fsf distros များတွင်မပါဝင်ပါ
အစွန်းရောက်ဝါဒကိုစွန့်လွှတ်ကြပါစို့၊ Microsoft နှင့်အခြားကုမ္ပဏီများစွာသည် linux ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင်ပူးပေါင်းပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းတို့သည် beta tester မဖြစ်စေရန် linux ကိုအသုံးပြုမည်မဟုတ်လော
ubuntu သည်အတူတူပင်ဖြစ်ပျက်သည်။ fsf က ubuntu ကို fedora ထက်များစွာဝေဖန်ခဲ့သည် သူက Amazon မှစပိုင်ဝဲများရှိတယ်လို့ပြောပြီး၎င်းကိုဖြည့်စွက်ရန်ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်
ယောက်ျားတွေ၊ ယောက်ျားတွေ ... ဒီမှာအစွန်းရောက်ဝါဒတွေ၊ မုသာတွေမရှိဘူး။ စီးပွားရေးအုပ်စုသည် (သူတို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အတူ) သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ရှိသောလည်ပတ်မှုစနစ်၏ပုံသဏ္,ာန်၊ ပုံသဏ္andာန်နှင့်ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ဖြစ်နိုင်သမျှဝေးဝေးသတိမပြုမိရန်ကိစ္စဖြစ်သည်။ Fedora ဟာ Red Hat အတွက်ဒီရည်မှန်းချက်တွေကိုပြည့်မီစေတယ်။ ယခု Centos သည်လည်းအလားတူပင်။
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လုပ်ဆောင်ရန်အခြားအလှည့်အပြောင်းများမှာ Suse နှင့် Ubuntu တို့ဖြစ်သည်။
... ပီဆို ၁၀ ခုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကအေးဆေးထည့်ထားတယ်။ ဒါကြောင့်သူကတောက်ပပြီးစီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်ရှိတယ်။
သို့သော်၎င်းသည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုသင်လွတ်လပ်စွာ run နိုင်၊ ပြင်ဆင်၊ လေ့လာ၊ ဖြန့်ဝေနိုင်သည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကဏ္တွင် Fedora နှင့် Red Hat နှစ်မျိုးလုံးသည်အခမဲ့ဆော့ဝဲများနှင့်၎င်းမှ Suse အကျိုးကျေးဇူးများကိုများစွာထောက်ခံခဲ့ကြသည်။
daryo of the answer 18. ကျွန်ုပ်သည်အစွန်းရောက်သမားမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် systemd ကိုမသုံးသောအစွန်းရောက်သမားပါ။ သင်သဘောတူပါကထိုအရာကိုသင်တွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့ Ubuntu ဖြင့်ကျွန်ုပ်ဖြေကြားခဲ့သည် (ကောင်းပြီ၊ တကယ်တမ်းမှာ Lubuntu ဖြစ်သည်) ။ လူအများကပြောတာက ၁၀၀% အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖြစ်ပြီးအခမဲ့မဟုတ်တဲ့ Firmware ရှိတယ်။ Ubuntu ထက်အများကြီးပိုပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါသူတို့သုံးတဲ့အခါတိုင်း fedora / centos / stella distros၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Ubuntu မှာ Ubuntu မှာ driver တစ်ခုထည့်သွင်းစရာမလိုဘဲကျွန်ုပ်အတွက်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည် (ကျွန်ုပ်တွင် b100 ရှိသည်)
PS: lubuntu တွင်ကျွန်ုပ်သည် Amazon-spyware ရှိသည်ဟုမထင်ပါ။
အခမဲ့နှင့်မူပိုင်ခွင့်ပြissue္ဌာန်းချက်များမပါ ၀ င်ပါ။ သင်သည်သူတို့၏အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲလမ်းညွှန်ချက်များကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ သူတို့သည်အလွန်တင်းကြပ်သည်။
အခမဲ့မဟုတ်သောတစ်ခုတည်းသောအရာသည် firmware ဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကသူဟာရပ်ရွာအတွက်အလုပ်များစွာလုပ်သည်။ အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲအားဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်လူတိုင်းသည် Red Hat အတွက်သာမကအကျိုးကျေးဇူးများခံစားရမည်။ မင်းရဲ့စိတ်စွန်းကွက်တွေကိုနှုတ်ဆက်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Fedora ကြောင့်နည်းပညာအများကြီးတိုးတက်လာလို့ပါ။
ငါ့မှာစနစ်တကျ configured Gnome 3.14 Antergos ရှိတယ်။ နှစ် ဦး စလုံးသည် Gnome ၃.၁၄ ဤ Fedora 3.14 သည်မည်သည့်ထပ်ဆင့်တန်ဖိုးကိုမည်သူမဆိုသိရှိပါသလား။ ပိုမိုမြန်ဆန်သလား၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသလား။
သုံးသပ်ချက်များအားလုံးက“ ကြီးကျယ်!” ဒါပေမယ့်ငါနောက် gnome 3.14 distro မရှိတဲ့ဘာမှမတွေ့ဘူး။
ကောင်းပြီ၊ Gnome စီမံကိန်းကို Red Hat မှကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ငွေကြေးထောက်ပံ့ထားသဖြင့် Gnome ၏ Fedora တွင်ပေါင်းစည်းမှုသည်ကြီးကျယ်သည်။ ငါစမ်းကြည့်စမ်းပါ။
Mario Garcia ဟုသူကပြောသည်
Rui Quaresma ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် install လုပ်ပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် Fedora 21 ၏ဖော်ပြချက်ကိုသဘောကျပါသည်။ Fontora (fontconfig-infinality) အမျိုးအစားကိုတိုးတက်စေရန်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် openSUSE 13.2 ကို အသုံးပြု၍ Fedora တိုးတက်မှုမရှိပါ ၂၁ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Rui Quaresma ကိုစာပြန်ပါ
Try Fedy၊ ၎င်းတွင် font rendering ကိုတိုးတက်စေရန်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိသည်။
သင့်မှာ F21 အတွက်သင့် repo မရှိသေးပေမယ့်ကောင်းပါတယ်။
su -c «ဆံပင်ကောက်ကောက် https://satya164.github.io/fedy/fedy-installer -o fedy-installer && chmod + x fedy-installer && ./fedy-installer »
Terminal ကိုဖွင့်ပြီး root လို login လုပ်ပါ။ ထို့နောက်အောက်ပါအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။
name = အဆုံးမဲ့
[အဆုံးမဲ့ - noarch]
CTRL + O ဖြင့်သိမ်းဆည်းပြီး CTRL + X နှင့်ပိတ်ပါ။
yum သည် fontconfig-infinality ကိုထည့်သွင်းပါ
နှင့်အဆင်သင့် :) ။
အလွန်ကောင်းသော post, Fedora ကိုမကောင်းတဲ့အရာ systemD ရှိပါတယ်, freebsd နှင့်အတူအသုံးပြုသူများသည်။
မင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပါတ်သက်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုငါ Fedora 21 ရင်းမြစ်ရှိတယ်။ အရည်အသွေးကောင်းတယ်။ သင်၏ရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော Fedora ၂၁ ရင်းမြစ်များကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းကြည့်ရှုလိုသူများအားလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Fedora 21 or CentOS7ကပိုကောင်းတဲ့ Peter?
ကျနော့်အမြင်ကတော့ CentOS7ကပိုကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့် Fedora 21 Workstation ကအရမ်းနီးနေပြီ။ ဆော့ဝဲလ်လည်းပိုများတယ်။ Gnome 3.14:) …
မည်သည့် Linux ဖြန့်ချိမှုများကိုသင်အသုံးပြုသနည်း၊ အမျိုးမျိုးသောအလုပ်များကိုလုပ်နိုင်သောအကောင်းဆုံးများမှာသင်မည်သို့ထင်သနည်း။
ဘယ်လို linux ဖြန့်ဖြူးမှုကိုသင်သုံးသလဲ။ အရာအားလုံးကိုလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးကဘာလို့ခင်ဗျားထင်သလဲ
Alask ကိုကြည့်ရအောင်၊ ငါဆာဗာမှာ FreeBSD 10.1 နဲ့၊ Desktop နဲ့ laptop ပေါ်မှာ CentOS7အထောက်အပံ့နဲ့တည်ငြိမ်တဲ့ distro ကိုထိန်းသိမ်းထားတယ်။ သူက packets များစွာနဲ့ distro ဖြစ်ပြီး EPEL repo နှင့်အတူဘာမှမလိုအပ်ပါဘူး။ အထက်တွင် ၁၀ နှစ်ကြာပံ့ပိုးမှုရသည်။
ငါ CRUNCHBANG မှလာသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤဖြန့်ဖြူးမှုကိုသုံးနှစ်တိုင်အသုံးပြုခဲ့သည်၊ ငြီးငွေ့လာပြီး Fedora သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ယခုအချိန်အထိကောင်းသည်။ မျှော်လင့်ငါနက်ရှိုင်းနိုင်ပါတယ်။
"Fedora ကိုထည့်သွင်းပြီးဘာလုပ်ရမလဲ" ???? အမြဲတမ်းအတူတူ, က uninstall ။
Isaac ဇာက်သည် robles ဟုသူကပြောသည်
မင်းရဲ့ post အရမ်းကောင်းတယ်၊ F21 ကိုပဲငါ install လုပ်လိုက်တယ်။ ငါတကယ်ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ (ငါဒီမှာတခြားဆောင်းပါးမှာတွေ့တဲ့အတိုင်း) ငါကြိုးစားခဲ့တာကို "distr-jummper" လို့ခေါ်ရမယ်။ [U / X / K / L] ငါမမှတ်မိတော့ဘူး buntu, Debian, Mint, မူလတန်းနှင့်ရှည်လျားသော etcetera, အမှန်တရားကတော့ F21 ကိုငါအလွယ်တကူနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူတွေ့မြင်နိုင်သည် (အခန်းကန့်ကိုထိန်းသိမ်းသည့် အချိန်မှစ၍ လက်ခွဲခွဲသည့်အချိန်တွင်သာအနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးခဲ့သည်) W8.1) ။ အမှန်တရားကကျွန်ုပ်သည် Ubuntu-GNOME ထက်ပိုမိုအရည်ပျော်ပြီးကျွန်ုပ်စက်သည် VAIO VGN-N350FE (Intel Core Duo CPU T2350 @ 1.867GHz အမြန်နှုန်း၊ 2GB RAM၊ 120GB HD [IDE)) ဖြစ်ပြီး၊ အကောင်းဆုံးသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသသော distro (မူလနှင့်အတူ)၊ ကျွန်ုပ်၏လက်တော့ပ်တွင်မူလတန်းရှိတစ်ခုတည်းသောအားသာချက်မှာကျွန်ုပ်၏လက်တော့ပ်သည်မူလချိတ်ဆက်မှုဖြင့်သာချိတ်ဆက်စရာမလိုဘဲဖွင့်သည်၊ အချိန်တိုင်းဆက်သွယ်မှုရှိရမယ်။ ငါ F21 အကြောင်းအကြောင်းအရာဆက်လက်ပံ့ပိုးရန်ဆက်လက်မျှော်လင့်ပါတယ်။ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ၊ Coahuila မှကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်သပါသည်
Isaac Robles အားပြန်ကြားပါ
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် and ၀ မ်းသာပါတယ်
ဟီပီတာ၊ ကျွန်ုပ် Fedora 21 သို့ပြောင်းသည်နှင့်တပ်ဆင်ခြင်းကိုသဘောကျသည်။ ငါကတည်းကစီးပွားဖြစ် Ati drivers တွေကို install ကတည်းက။
ငါမွမ်းမံရုံမျှသာပြုသော်လည်းငါမှာမေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်။ rpmfusion repositories တွင်ဗားရှင်း ၂ ခုရှိသည်။ ဘယ်ဟာကိုအကြံပြုသလဲ
ငါဟာတည်ငြိမ်ပြီးလက်ရှိစနစ်ကိုရှာနေတာကြောင့်ပြောင်းလဲသွားတယ်၊ ဒါပေမယ့်လအနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ၊ စနစ်ကိုချိုးဖောက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့လုပ်နိုင်တယ်။
ငါ distro ဗားရှင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောဗားရှင်းကိုအစဉ်အမြဲတပ်ဆင်သောကြောင့်သင်အားဗားရှင်း ၂၁ အခမဲ့နှင့် ၂၁ မလွတ်လပ်သောအသုံးပြုရန်အကြံပြုပါသည်။
Fedora ကိုကျွန်တော် uninstall လုပ်လိုက်ပါ၊ သူက desktop ပေါ်မှာရှိနေတာကိုမကြိုက်ပါဘူး။ သူကပြသနာတော်တော်များများကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ Slow repositories, သူတို့စနစ်တကျ install မလုပ်ပါဘူး၊ Firefox ပိတ်ပြီး၊ Ati drivers (fglrx) အားနည်းနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ယခုတွင်ငါသည် Arch သို့ရောက်နေပြီဖြစ်သော်လည်းယခုငါ Ciclyc distros များကိုလိုချင်သည်၊ ငါ system နှင့်တိုက်ခိုက်ရန်ငြီးငွေ့နေသည်။
ငါ Ubuntu (ဒါပေမယ့် Unity ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာ) ဒါမှမဟုတ် Cinnamon နဲ့ Lmint ကိုစဉ်းစားနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ငါမြင်နေတာကတော့ version တစ်ခုကနေအခြားတစ်ခုကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းပြ12.04နာက ၁၂.၀၄ မှ ၁၄.၀၄ ။
နှုတ်ခွန်းဆက်စကားနှင့်ပျော်ရွှင်ဖွယ်အားလပ်ရက်များ (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄) ။
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်တော် Fedora နှင့် Gnome-shell နှင့်ဘာမှပြhaveနာမရှိသော Kikin ဖြစ်သည်။ repositories ၏မြန်နှုန်းအတွက် plugin တစ်ခုရှိသည်။
yum ကို install yum-plugin-fastestmirror
Ati ၏ပိုင်ဆိုင်သောယာဉ်မောင်းများကော ... Fedora သည်အမြဲတမ်းအခမဲ့ဒရိုင်ဘာများကိုအမြဲတပ်ဆင်ပြီး၊ သူပိုင်ပစ္စည်းများကိုပုံမှန်အားဖြင့်မည်သည့်အခါမျှတပ်ဆင်ခြင်းမရှိပါ။ စီးပွားဖြစ်ယာဉ်မောင်းသူများအတွက်သင်လုပ်ရမည့်အချက်များမှာ -
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်သည်အခမဲ့ယာဉ်မောင်းများအကြောင်းစဉ်းစားမိပြီးကျွန်ုပ်သည်အခမဲ့ဒရိုင်ဘာများကိုအမှန်ပင်တပ်ဆင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့ကိုငါပြောင်းလဲပစ်လိုက်သော်လည်းငါမကြိုက်ပါ။
ဟုတ်တယ်၊ ငါက "အမြန်ဆုံးသောကြေးမုံ" စသည်တို့ကိုသုံးတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကငါကိုအထင်ကြီးစေခဲ့တယ်။
ငါ့လိုကိစ္စတစ်ခုမှာအလင်းတစ်ခုခုလိုချင်လို့ပါ။ အကယ်၍ Arch သည်ကျွန်ုပ်အားပျက်ကွက်လျှင် (ဖြစ်နိုင်ဆုံးဖြစ်နိုင်သည်) ကျွန်ုပ်သည် Fedora ကိုနောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခုနှင့် Ubuntu ကိုနောက်ထပ်ပေးမည်။ ငါတစ်ခုချင်းစီကိုအဘို့အ Usb installation ကိုအဆင်သင့်ရှိသည်
ကောင်းပြီ၊ Slackware ကို version 14.2 တွင်အခွင့်အလမ်းအသစ်တစ်ခုကို caramelized လုပ်တော့မည်ဖြစ်သည်။ D ... အဘယ်ကြောင့်နည်း။ KDE 5၊ XFCE 4.12၊ LXQT နှင့် -
14.1 အတွက်ရရှိနိုင်သော်လည်း 14.2 တွင်၎င်းကို distro ... နှင့် Slackware ရှိ manual dependency resolution သို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ပါသည်။
မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်စမ်းသပ်ခြင်းကိုဆွဲဆောင်ခြင်းမပြုပါ။ Slackware ကအရမ်းတည်ငြိမ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကထပ်ခါတလဲလဲမဖြစ်ဘူး၊ တစ်ခုခုဖြစ်လာရင်အဲဒါအတွက်စာရွက်စာတမ်းတွေသိပ်မရှိဘူး; ဒါကြောင့်အခု Ubuntu ကိုသွားနေတယ်။ အနည်းဆုံးငါသိတယ် Unity ဆိုတာငါသိတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကအလင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
SlackWare 14.2 ကိုဘယ်တော့လွှတ်မှာလဲ။ ငါစိုးရိမ်တယ် ... ...
မင်္ဂလာပါ @AleQwerty၊ ကျွန်ုပ်သိထားသည့်အတိုင်း၊ မတ်လကုန်သို့မဟုတ်beginningပြီလအစတွင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ )
@ kik1n ၎င်းကို Unity ဖြင့် Ubuntu အားတစ်ခုတည်းသောအရာအားပေးလိမ့်မည်။ Debian ၏စမ်းသပ်ခြင်း / မတည်မငြိမ်ဖြစ်သောဌာနခွဲမှလာသောအစုလိုက်အပြုံလိုက် bug များဖြစ်လိမ့်မည်။ Ubuntu ကိုအသုံးပြုခြင်းထက် Arch တွင်နေခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်။
ဟုတ်တယ်၊ ငါသိတယ်၊ ဂရပ်ဖစ်ဝန်းကျင်ကိုစည်းလုံးစေဖို့ကြိုးစားနေတယ်။
oSUSE ကိုချစ်သောအချိန်ကာလမရောက်မှီတိုင်အောင်ငါသည် Arch ပေါ်မှာရှိနေဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့အားအသစ်သောအရာများပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အခက်အခဲကြုံရသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ fedora အသစ်ဖြစ်နေပြီ။ ငါကြိုးစားတော့မယ်။ တပ်ဆင်ပြီးသည့်နောက်ကျွန်ုပ်၏အကြံပေးချက်ဖြင့်စတင်ခဲ့သော်လည်း wget သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ခဲ့ပါ။
su -c 'dnf install –nogpgcheck http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-stable.noarch.rpm''
မင်္ဂလာပါနှင့်ချီးမွမ်းခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် :) ။ wget နှင့်သင်ပြုသောအရာသည် package ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက်သင်နှစ်ချက်နှိပ်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ yum ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် rpmfusion - free - release - stable.noarch.rpm && yum ကို install လုပ်ပါ။ rpmfusion - nonfree - release - stable.noarch.rpm
သင်လုပ်ခဲ့သောအရာသည် YUM အဟောင်းကိုအစားထိုးမည့် Fedora program (DNF) အသစ်ကို အသုံးပြု၍ တစ်ချိန်တည်းတွင် download နှင့် install ဖြစ်သည်။
Nicolas Rincon ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းမွန်သော post၊ ကြိုဆိုပါ၏။ ကြည့်ရှုပါ။ ကျွန်ုပ်သည် Fedora 21 ၌ post installation အားလုံးကိုလုပ်ပြီးပါပြီ။ ဆော့ဝဲစင်တာမှ software ထည့်သွင်းခြင်းပြproblemsနာများရှိပါသည်။ application အားလုံးတွင် install လုပ်ရန်ခလုတ်မရှိပါ။ ကျွန်ုပ် root root ကိုလျှောက်လွှာတင်ပြီး download တွင်အမှားတစ်ခုရှိကြောင်းပြောပြသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Nicolas Rincon အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ။ Fedora ဆော့ဝဲစင်တာတွင်ထူးခြားသောပြproblemနာတစ်ခုရှိပါသည်။ ၎င်းသည်သူသည် rpmfusion ကဲ့သို့သော repos များနှင့်မဟုတ်ဘဲ base repos နှင့်သာအလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သင့်အားပြproblemနာမရှိသော yumex ကိုထည့်သွင်းရန်သင့်အားအကြံပေးပါသည်။
Fedora 21 နှင့်အထက်အတွက်:
yum yumex ထည့်သွင်းပါ
Fedora 22 နှင့်နောက်ပိုင်းအတွက်:
dnf yumex-dnf install လုပ်ပါ
Lonquimay, Araucanía, ချီလီမှကြိုဆိုနှုတ်ဆက်သည်
Postora ကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ fedora 21 မှာအင်တာနက်မရှိတဲ့ media player၊ office, burners နဲ့ browsers လို application တွေကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်မလဲ။
အင်တာနက်မရှိလျှင် dvd အပြည့်မှ local repository တစ်ခုကိုဖန်တီးရမည်။
Tanglu 2.0 "Bartholomea" ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်